Ukuqondiswa komongo: Ukwakha ukuphepha komkhiqizo ku-Era engaphansi kwamakhukhi | Martech Zone
Ukuphepha komkhiqizo kuyisidingo esiphelele kubakhangisi abaya phambili kule ndawo yezepolitiki nakwezomnotho futhi kungenza umehluko ekuhlaleni ebhizinisini.
Imikhiqizo manje sekufanele idonse izikhangiso njalo ngoba zivela ezimeni ezingafanele, nge Abakhangisi abangama-99% bakhathazekile ngezikhangiso zabo ezivela ezindaweni eziphephe sha.
Kunesizathu esihle sokukhathazeka
Ucwaningo luye lwabonisa izikhangiso ezibonakala eduze kokuqukethwe okungekuhle okuholela ku Ukunciphisa izikhathi ezingu-2.8 enhlosweni yabathengi ukuzihlanganisa nale mikhiqizo. Ngokwengeziwe, izingxenye ezimbili kwezintathu zabathengi, ababekade bekhombisa inhloso ephezulu yokuthenga umkhiqizo, bebemancane amathuba okuthi bathenge umkhiqizo ngemuva kokuvezwa kwisikhangiso senkampani efanayo esivela nokuqukethwe okungafanele; kanye nombono womthengi walowo mkhiqizo wehle izikhathi eziyisikhombisa.
Ukuqondiswa komongo: Isendlalelo Esisha Sobuhlakani obuphephe umkhiqizo
Izindaba ezinhle ukuthi, ukuqondiswa komongo kuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo ngokuhlaziya okuqukethwe futhi kungafaki ukubekwa kuma-verticals nokuqukethwe okubhekwa njengokungaphephile. Izinjini ezibhekiswe kokuqukethwe ezisebenza kahle ziyakwazi ukucubungula zonke izinhlobo zokuqukethwe ezikhona ekhasini, ukunikeza isiqondiso sangempela esingu-360-degree maqondana nencazelo ye-semantic yekhasi.
Amathuluzi amahle avumela izindlela eziyinkimbinkimbi kunokufana kwamagama angukhiye alula, futhi avumela abathengisi ukuthi bakhethe izindawo abafuna ukuzifaka, futhi okubaluleke kakhulu, lezo abafuna ukuzikhipha, njengokuqukethwe okusebenzisa inkulumo enenzondo, ukuhlanganyela ngokweqile, ipolitiki enkulu, ukucwasa ngokobuhlanga, ubuthi, stereotyping, njll.
Isibonelo, izixazululo ezinjenge-4D zinika amandla ukukhishwa okuzenzakalelayo okuthuthukile kwalezi zinhlobo zamasignali ngokuhlanganiswa okukhethekile nabalingani abangochwepheshe abanjengoFactmata, namanye amasiginali wokuqukethwe angangezwa ukuqinisa ukuphepha kwalapho kuvela khona isikhangiso.
Ingabe Umkhiqizo Wakho Wezikhangiso Uphephile?
Ithuluzi lokukhomba lokuqukethwe elinokwethenjelwa lingahlaziya okuqukethwe futhi likuxwayise ngokuphula umthetho okungaqondakali kokuphepha komkhiqizo njenge:
Ipolitiki enkulu noma ukuchema kwezepolitiki
Ukuqondiswa komongo ngaphandle kombhalo
Abanye bathuthuka ukuqondiswa komongo Amathuluzi anekhono lokuqashelwa ividiyo, lapho angahlaziya khona uhlaka ngalunye lokuqukethwe kwevidiyo, akhombe amalogo noma imikhiqizo, abone izithombe eziphephile zomkhiqizo, ngombhalo olalelwayo okwazisa konke, ukuhlinzeka ngemvelo efanelekile yokumaketha ngaphakathi nangaphakathi kwaleyo ngxenye yokuqukethwe kwevidiyo. Lokhu kufaka phakathi, okubalulekile, yonke ifreyimu engaphakathi kwevidiyo, hhayi isihloko kuphela, isithonjana, namathegi. Lolu hlobo olufanayo lokuhlaziya lusetshenziswa kukho konke okuqukethwe komsindo nezithombe, ukuqinisekisa ukuthi isiza sisonke siphephe ngomkhiqizo.
Isibonelo, ithuluzi lokukhomba lokuqukethwe lingahlaziya ividiyo equkethe izithombe zomkhiqizo wobhiya, likhombe ngomsindo nevidiyo ukuthi liyindawo ephephe sha, futhi lazise abathengisi ukuthi isiteshi esihle sokukhangisa nokuqukethwe ngobhiya ukuvela kuzethameli eziqondiwe ezifanele.
Amathuluzi amadala angahlaziya kuphela izihloko zamavidiyo noma umsindo, futhi ungacubunguli ngokujulile ezithombeni, okusho ukuthi izikhangiso zingagcina zisendaweni engafanele. Isibonelo, isihloko sevidiyo singahle sibe msulwa futhi sithathwe Ephephile ngethuluzi elidala lokuqukethwe, njenge Ungenza kanjani ubhiya omkhulu kodwa-ke okuqukethwe yividiyo uqobo kungahle kungalungile, njengevidiyo yentsha engaphansi kweminyaka eyenza ubhiya - manje ukukhangisa ngomkhiqizo kuleyo ndawo kuyinto engekho umthengisi angakwazi ukuyithenga njengamanje.
Noma kunjalo izixazululo ezifana 4D bakhe umkhakha wemakethe wokuqukethwe wokuqala kwezimboni owenza abalingani bezobuchwepheshe abakhethiwe bakwazi ukufaka ama-algorithms abo okuphathelene njengokwengeza kokukhomba, nozakwethu abanjengoFactmata banikela ngokuvikelwa kwemikhiqizo kokuqukethwe okubandlulula, okungalungile, noma okunobuthi futhi kungasetshenziswa ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo nokufaneleka kuphethwe ngendlela efanele.
Thola okuningi mayelana nokuqondiswa komongo ephepheni lethu lakamuva elimhlophe:
Ukuqondiswa kokuqukethwe: Buyela Kusasa Lokumaketha
ISilverbullet wuhlobo olusha lwamasevisi wokukhangisa we-data-smart, aklanyelwe ukunika amandla amabhizinisi ukufezekisa ngenhlanganisela eyingqayizivele yezinsizakalo zedatha, okuqukethwe okunolwazi olunzulu, kanye nohlelo. Ukuhlangana kwethu kobuhlakani bokuzenzela kanye nokuhlangenwe nakho komuntu kunikeza ulwazi lokuguqula uguquko lwakho lwezentengiso ngekusasa.
Tags: ukuphepha komkhiqizoclickbaitizikhangiso zesimoukuqondiswa komongoukuhlanganyela ngokweqileipolitiki enkuluukufunda imishinii-silverbulletinkolelo-ze
Tshala imali kuKlaviyo's Ecommerce Marketing Automation Namuhla Ngaphambi Kwesikhathi Sokuthenga Eholidini